China Round Shower Rail Abavelisi kunye nababoneleli-Huanyu Sanitary Ware
Ikhaya > Iimveliso > Isiporo seshawa > Umzila kaloliwe ojikelezayo weshawari
Umzila kaloliwe ojikelezayo weshawari Abavelisi
I-Ningbo Huanyu Sanitary Ware Limited, umenzi ophezulu ochwephesha kunye nomthengisi ngaphandle e-China kwaye ube kumgca weplastiki ngaphezu kweminyaka engama-20 kunye neshishini lempahla yococeko iminyaka engaphezu kwe-10, Kwakhona. siye saqinisekisa ngenkqubo yokulawula umgangatho ye-ISO 9002S ekuqaleni kuka-1999. sivelisa zonke iimveliso zayo eTshayina. Iimveliso zethu iilayini zococeko ziquka oku kulandelayo: Intloko yeshawa, Ishawa yesandla, iiseti zikaloliwe zesilayidi, izibambi zeshawa, ithumbu leshawa, iseti yeshawa, isibiyeli sodonga lweshawa, izincedisi zeshawa, ishawari yeBidet, ishawari yeshawari ejikelezayo iimveliso zococeko kwi Made in China Website.
Ngokuphathelele kwishawara ejikelezayo kaloliwe, sineendlela ezininzi ezahlukeneyo. Eyona nto yakudala yi "7" intonga ebesiyithengisa. Sineentlobo ezintathu zeereyile zeshawa ezinokuthi zenziwe ngokweemfuno zabathengi. Eyokuqala yi-201 yensimbi engenasici, i-chrome-plated. Eyesibini yi-304 yentsimbi ye-chrome plating. Into yesithathu lubhedu. Unyango olungaphezulu lunokwenziwa ngokwezifiso.
Ixhotyiswe ngoomatshini abatsha beplastikhi abalawulwa yikhompyutha; Iinkqubo zovavanyo ezinobunkunkqele kunye noomatshini abapakishwayo be-blister abalungileyo, siyakwazi ukukubonelela ngomgangatho kaloliwe weshawari ejikelezayo
njengoko kufuneka. Ngokumalunga nokupakisha, silungile ekupakisheni amadyungudyungu kunye neebhokisi zemibala, ewe, sinokubonelela ngokupakisha okukhethekileyo ukuba abathengi banemfuno. Njengomvelisi, sineziko lethu lokubumba, iinjineli ezinamava zilungele ukwenza naluphi na uphuculo lohlengahlengiso olucelwe nguwe ngexesha elikhawulezayo.
Thenga iimveliso kumzi-mveliso wethu obizwa ngokuba yi-Huanyu Sanitary Ware yenye yezona zinto ziphambili Umzila kaloliwe ojikelezayo weshawari zabavelisi kunye nababoneleli eTshayina. Umgangatho wethu oPhezulu Umzila kaloliwe ojikelezayo weshawari uthandwa ngabantu abafuna ukufumana izinto zorhwebo eziphantsi. Sinemveliso ezininzi kakhulu zokubonelela ngenkonzo yehoseyile. Unokuqiniseka ukuba uthenge ixabiso eliphantsi kumzi-mveliso wethu.